You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / To A Better Health Article Collection / Diseases / နှလုုံးသွေးကြောပိတ်ရာဂါ အကြောင်း ကျန်းမာရေး ဗဟုုသုုတ ဒါန
နှလုုံးသွေးကြောပိတ်ရာဂါ အကြောင်း ကျန်းမာရေး ဗဟုုသုုတ ဒါန အပိုုင်း၁
လူ အတော် များ များ က နှလုုံးသွေးကြောပိတ် တယ် ဆိုု ရင် cholesterol များ လိုု့ ဆိုု ပြီး ထင် နေ ကြ ပါ တယ်။
ဒီ လိုု အဖြစ် မျိုး ရောက် အောင် လဲ ဆေးကုုမ္ဗဏီ ကြီး တွေ ဟာ ဒေါ်လာ သန်း ပေါင်း များစွာ အကုုန် ခံ ပြီး cholesterol ချ ဆေး တွေ ကိုု ကြော်ငြာ နေ ကြ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီဆေး တွေ ဟာ တစ်နှစ် ကိုု ဒေါ်လာ သန်း ပေါင်း များစွာ ဝင် ငွေ ရ အောင် ရှာ ပေး နေ တဲ့ ဆေး ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒါ ကြောင့် လဲ အခုု နောက် ပိုုင်း သိ လာ တဲ့ cholesterol က အဓိက အ ကြောင်း မဟုုတ် တာ ကိုု သိ ပေ မဲ့ လို့ ဘာ အသံ မှ မ ထွက် ကြ ပါ။
လူနာ အနေ နဲ့ က ဗဟုုသုုတ ရှိ ထား ဖိုု့ အများ ကြီး လိုု ပါ တယ်။
၂၀၀၀ ခုု နှစ် တည်း က Harvard University မှ ဆရာဝန် များ က သုုတေသန များ ကိုု ထုုတ် ခဲ့ ပါ တယ်။
နှလုုံးသွေး ကြော ကျဉ်း တဲ့ အဓိက အကြောင်း က ခန္ဓာကိုုယ်တွင်း ယောင် ကိုုင်း ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ် တဲ့။
အင်္ဂလိပ် လိုု Inflammation လိုု့ ခေါ် ပါ တယ်။
ခန္ဓာကိုုယ် ဘယ်လောက် ယောင် ကိုုင်း နေ သ လဲ ဆိုု တာ သွေး ဖောက် စစ် လိုု့ ရ ပါ တယ်။ C Reactive protein လိုု့ ခေါ် ပါ တယ်။ CRP ဖြစ် ပါ တယ်။ မြန်မာ ပြည် မှာ စစ် လိုု့ ရ ပါ တယ်။
ဒီ CRP level တက် နေ ရင် နှလံး သွေးကြောပိတ် ပြီး heart attack ရ ဖိုု့ လမ်း ပိုု များ ပါ တယ်။ ထိုု နည်း တူ စွာ လေ လည်း ဖြတ် နိုုင် တယ် ပေါ့။
မိတ်ဆွေ တိုု့ သိ ထား ရ မှာ က အခုု လိုု ခန္ဓာကိုုယ် ယောင် ကိုုင်း ခြင်း ကြောင့် သွေးကြောပိတ် တယ် ဆိုု ရင် သွေး ကြော ဆိုု တာ နှလုုံး တစ် ခုု တည်း မှာ ရှိ တာ မဟုုတ် ပါ။
တစ် ကိုုယ်လုုံး မှာ သွေး ကြော တွေ ရှိ တာ ဆိုု တော့ ဥဏှောက် ကိုု သွား နေ တဲ့ သွေးကြော လည်း ပိတ် နိုုင် သ လိုု၊ အခြား နေ ရာ တွေ မှာ လည်း ပိတ် နိုုင် ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဥပမာ အမျိုးသား တွေ ဆိုု ရင် အမျိုးသား လိင်အင်္ဂါ ကိုု သွား နေ တဲ့ သွေး ကြော ပိတ် ရင် လိင်ဆက်ဆံ မှု မှာ ပြဿနာ တက် သ လိုု ပေါ့။
အချို့ လူ တွေ က လဲ သွေးစစ် ကြည့် လိုု့ cholesterol level ကောင်း နေ တယ်၊ မတက် နေ ဖူး ဆိုု ရင် ကျေ နပ် နေ ကြ ပါ တယ်။
လူ အများ မသိ တဲ့ အချက် က normal level of cholesterol နဲ့ heart attack ရ နိုုင် တယ်၊ လေ လည်း ဖြတ် နိုုင် တယ် ဆိုု တဲ့ အချက် ဖြစ် ပါ တယ်။
Heart attack ရ သူ ၅၀% မှာ cholesterol က ပုုံမှန် ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒါ ကြောင့် သွေးစစ် တဲ့ အခါ CRP လိုု့ ခေါ် တဲ့ သွေးကြော ယောင် ကိုုင်း ခြင်း ကိုု ပြ တဲ့ Inflammatory marker ဟာ အလွန် အရေး ကြီး ပါ တယ်။
မိတ်ဆွေ တိုု့ သိ ထား ရ မှာ က ခန္ဓာကိုုယ် တွင်း ယောင် ကိုုင်း ပြီ ဆိုု ရင် တစ် နေ ရာ တည်း မှာ ဖြစ် ခဲ ပါ တယ်။
နှလုုံး က လည်း သပ်သပ် သွေး ကြောပိတ် တယ် ဆိုု တာ ဖြစ် နိုုင် ပေ မဲ့ များ သော အား ဖြင့် အခြား နေ ရာ တွေ လည်း ပိတ် နေ တတ် ပါ တယ်။
အင်္ဂလိပ် လိုု ပြော ပြ ရ ရင်၊ It isasystemic disease and rarely is local.
တစ်ခါ တည်း အများ ကြီး ရေးရင် လူ တွေ မ ဖတ် မှာ စိုုး လိုု့ နည်း နည်း ခြင်း နား လည် တဲ့ အထိ တင် ပြ သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
နှလုုံး သွေးကြောပိတ် ရောဂါ အပိုုင်း၂ --------
သွေးကြောနံရံ များ ယောင်ကိုုင်းခြင်း နဲ့ ပတ်သက် လိုု့ မနေ့ က C Reactive Protein ( CRP ) အကြောင်း တင် ပြ ခဲ့ ပြီး ဖြစ် ပါ တယ်။ (one of the inflammatory markers )
ဒီ ကနေ့ သွေးကြောတွေ ယောင် စေ သည့် အကြောင်း နောက် တစ်ခုု ပြော ပါ ဦး မည်။
Cholesterol မဟုုတ် သေး ဖူး နော်။
Homocysteine လိုု့ ခေါ် တယ့် ပရိုုတင်းဓာတ် အစာချေ ခြင်း မှ ထွက် လာ သော Amino Acid တစ်ခုု ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီဓာတ် ဟာ သွေးကြော နံရံ တွေ ကိုု အလွန် ယောင် ကိုုင်း စေ ပါ တယ်။
သွေးဖောက် စစ် သည့် အခါ ဒီ Homocysteine ကိုု စစ် သင့် ပါ တယ်။ သွေးကြော တွေ ယောင် ကိုုင်း နေ ခြင်း ကိုု ပြ သည့် သင်္ကေတ နောက် တစ်ခုု ဖြစ် ပါ တယ်။
Cholesterol ထက် အများကြီး ပိုု ပြီး အရေးကြီး ပါ တယ်။
ဒီဓာတ် များ နေ ရ သည့် အဓိ က အကြောင်း က တော့ ခန္ဓာကိုုယ် ထဲ မှာ B Vitamins တွေ နည်း နေ လိုု့ ဖြစ် ပါ တယ်။ အထူးသဖြင့် B12, B6 and Folic acid ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီဓာတ် များ နေ တယ် ဆိုု ရင် ဒီ B vitamin သုုံးခုု ကိုု မှီဝဲ ခြင်း အား ဖြင့် သွေးကြော တွေ ကိုု ယောင် ကိုုင်း စေ သည့် ဓာတ် ကိုု လျော့ ပေး လိုုက် နိုုင် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ B group of vitamins ကိုု မှီဝဲ ခြင်း ဖြင့် ဘာ ဥပါဒ် မှ လဲ မရှိပါ။ ဘေးတွက် ဆိုုးကျိုး လဲ မရှိ ပါ။ စျေး လဲ အလွန် ချို သာ ပါ တယ်။
ဒါ က ဆရာဝန် ညွှန်ကြား မှု မလိုု ပဲ မိမိ ဖာသာ မိမိ ကိုုယ် ကိုု အကျိုး ပြု နိုုင် သည့် နည်း ဖြစ် ပါ တယ်။
Homocysteine level တက် နေ သူ များ အတွက်
B6 ( in the form of P5P ) 50mg
Folate 600 microgram
B12 5000 microgram
သောက် ကြည့် လိုု့ ရ ပါ တယ်။
သောက် သည့် အခါ ရေ ထဲ မှာ Rock Salt အနည်း ငယ် ထည့် ပြီး သောက် ရင် ပိုု ပြီး အစွမ်း ထက် ပါ လိမ့် မယ်။
Rock salt မှာ ပါ နေ သည့် ဝါယောဓာတ် တွေ ဟာ ဒီ ဗီ တာ မင် တွေ ကိုု ကလာပ်စည်း ထဲ ကိုု ပိုု့ ပေး မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဓာတ် ဆား တွေ အား နည်း နေ ရင် လည်း ဗီ တာ မင် တွေ သောက် နေ ပေ မဲ့ ကလာပ်စည်း ထဲ ကိုု မ သယ် ဆောင် နိုုင် တာ ကြောင့် သွေး ထဲ မှာ ပဲ များ နေ ပြီး မ ထိ ရောက် တတ် ပါ။
ရန်ကုုန် မှာ Homocysteine သွေး ဖောက် စစ် လိုု့ ရ ပါ တယ်။
ပထမ နေ့ က သွေးကြောတွေ ယောင်ကိုုင်း ခြင်း သင်္ကေတ ဖြစ် သည့် C Reactive proetein အ ကြောင်း ပြော ခဲ့ ပါ တယ်။
ဒီ နေ့ နောက် သင်္ကေတ တစ် ခုု ဖြစ် သည့် Homocysteine အကြောင်း ပြော ပါ တယ်။
အထူး သဖြင့် ဆီးချို ရှိ သူ တွေ၊ သွေးတိုုးရှိ သူ တွေ၊ နှလုုံးသွေးကြော ကျဉ်း နေ သူ တွေ ၊ ဒီ Inflammatory Markers တွေ ဖောက် ကြည့် သင့် ပါ တယ်။
အခုုခေတ် မှာ cholesterol ကိုု သာ အရေးထား နေ ကြ တာ မိုု့ အမှန် တကယ် အရေး ကြီး သည့် Inflammatory markers တွေ ကိုု ဖောက် ကြည့် ရန် သတိ ထား သူ နည်း လှ ပါ တယ်။
နှလုုံး သွေးကြောပိတ် ရောဂါ အပိုုင်း ၃ --
နှလုုံးသွေးကြောပိတ် စေနိုုင်သည့် နောက်ဓာတ် တစ် မျိုး မှာ Fibrinogen ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီဓာတ် ဟာ သွေး ကိုု ပြစ် စေ သည့် ပရိုုတင်းဓာတ် တစ် မျိုး ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ Fibrinogen များ နေ ရင် နှလုုံး သွေးကြော များ ပိတ် ခြင်း၊ လေဖြတ် ခြင်း၊ stent ထည့် ထားသူ များ သွေးကြောပြန် ပိတ် ခြင်း၊ ရုုပ် တရက် သေဆုုံးခြင်း စ သည် ဖြင့် ဖြစ် တတ် ပါ တယ်။
အချို့ က လဲ မျိုးရိုုး လိုုက် ပြီး ဒီ ဓာတ် များ နေ တတ် ပါ တယ်။
အထူးသဖြင့် ဆေးလိပ် သောက် သူ များ မှာ Fibrinogen တက် နေ တတ် ပါ တယ်။
သွေးဖောက်စစ် ကြည့် လိုု့ 350mg/dl အထက် မှာ ရှိ နေ တယ် ဆိုု ရင် ဆေး လိပ် သောက် တာ ချက်ချင်း ဖြတ် ပြစ် သင့် ပါ တယ်။
Insulin resistance ခေါ် ဆီးချို ရောဂါ ရှိ သူ တွေ မှာ လည်း ဒီဓာတ် များ နေ တတ် ပါ တယ်။
ကိုုယ်ဝန် တားဆေး သောက် နေ သူ အမျိုးသမီး များ မှာ လည်း Fibrinogen များ နေ တတ် ပါ တယ်။
အသက် အရွယ် ကြီး လာ သော အမျိုးသမီး တွေ မှာ လည်း များ နေ တတ် ပါ တယ်။
ဒီ ဓာတ် ဟာ လည်း ရန် ကုုန် မှာ စစ် လိုု့ ရ ပါ တယ်။
ဒီ ဓာတ် များ နေ ရင် အကောင်း ဆုုံး က သွေး လှူ ဘဏ် မှာ သွေး သွား လှူ လိုုက် ပါ။
ကုုသိုုလ် လဲ ရ၊ သူ တစ်ပါး အတွက် လဲ အကျိုးရှိ၊ မိမိ အတွက် လဲ အကျိုး ရှိ တာ မိုု့ ဒီ နည်း ဟာ အကောင်း ဆုုံး နည်း ဖြစ် ပါ တယ်။
နှလုုံးသွေးကြောပိတ် ခြင်း ရောဂါ အပိုုင်း ၄.
အခုုခေတ် မှာ နှလုုံးသွေးကြော ပိတ် ပြီ ဆိုု ရင် ----
၁. Stent ထည့် ကြ တယ်။
၂. Bypass လုုပ် ကြ တယ်။
၃. ပြီးရင် ဆေး မျိုးစုုံ တင် ကြ တယ်။
cholesterol ချ ဆေး၊ သွေး မပြစ် ရ အောင် Plavix စ သည် ဖြင့်၊ အချို့ လဲ Coumadin၊ အချို့ လဲ Pradaxa, Xarelto စ သည် ဖြင့်၊ သွေး တိုုး ချ ဆေး၊ သွေး ထဲ က သကြား ချ ဆေး၊ နှလုုံးခုုန် မှန် ရ အောင်၊ ဆေး များ စ သည် ဖြင့်၊ ဆေး မျိုး စုုံ ဖြစ် ပါ တယ်။
သေသေချာချာ စဉ်းစား ကြည့် ကြ ရ အောင်။
အရေးပေါ် အနေ နဲ့ သွေး ကြော တွေ ကိုု သွေး သွား လိုု့ လွယ်ကူ ရ အောင် ဖွင့် ပေး လိုုက် တာ ကောင်း ပါ တယ်။
( အမှန် တကယ် လိုုအပ် ရင် ပေါ့ ။ ခေတ် ကြီး က ပြောင်း လွဲ လာ တာ မိုု့ မ လိုု အပ် ပဲ လုုပ် တာ တွေ လဲ အများ ကြီး ရှိ ပါ တယ်။ အနောက် နိုုင် ငံ တွေ မှာ ခဏခဏ သတင်း ထဲ မှာ ပါ လာ နေ ကျ ဖြစ် ပါ တယ်)။
အမှန် တကယ် လိုု အပ် လိုု့ ဖွင့် ပေး တယ် ပဲ ထား လိုုက် ပါ တော့။
အခုု လိုု ကုု ပေး လိုုက် တာ အကြောင်း တွေ ကြောင့် ဖြစ် လာ တဲ့ နှလုုံးသွေး ကြော ပိတ် ခြင်း ကိုု ခေတ္တ ပြဿနာ ဖြေ ရှင်း လိုုက် ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။
အဓိက အကြောင်း တွေ ကိုု သွား ပြီး မပြုပြင် ဖူး ဆိုု ရင် နောက် ပိုုင်း ပြန် ပိတ် ဖိုု့ လမ်း အလွန် များ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဥပမာ ပိတ် နေ တဲ့ ရေမြောင်း ကိုု ဒုုတ် နဲ့ ထိုုး ပြီး ကော် လိုုက် သ လိုု ပါ ပဲ။ အထက် ကစီး ဆင်း လာ တဲ့ အမှိုက် သရိုုက် တွေ ကိုု မ ဖယ် ရှား ပြစ် ဖူး ဆိုု ရင် ပြန် ပိတ် ဖိုု့ လမ်း အ တော် များ ပါ တယ်။
ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာဘုုရား ဟောတော် မူ ခဲ့ သည့် အတိုုင်း၊ အကျိုး တွေ ကိုု ပပျောက် စေ ချင် ရင် အကြောင်း တွေ ကိုု ပိတ် ပြစ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒီ နေ ရာ မှာ နှလုုံးသွေးကြော ပိတ် ရ သည့် အဓိက အကြောင်း ရင်း က သွေးကြော နံရံ တွေ ယောင် ကိုုင်း ခြင်း ဖြစ် တာ မိုု့ သွေးကြောနံရံ တွေ ကိုု ယောင် ကိုုင်း စေ တတ် သော အချက် အလက် ကိုု မ ပြင် သမျှ ကာလ ပတ် လုုံး အလုုပ် မ ဖြစ် ပါ။
ကျွန်မ မေး ချင် တာ က stent ထည့် ထား သူ တွေ၊ Bypass လုုပ် ထား သူ တွေ၊ ဆေး တွေ သောက် နေ သူ တွေ ၊ Inflammatory markers လိုု့ ခေါ် တဲ့ သွေးကြော တွေ ယောင်ကိုုင်း ခြင်း သင်္ကေတ တွေ ဖောက် စစ် ကြည့် ကြ ရဲ့ လား ဆိုု တာ ပါ ပဲ။
အဓိက အကြောင်း ကိုု မပြင် သမျှ ကာလ ပတ် လုုံး ဒီ ရောဂါ နဲ့ ပဲ တဝဲလည် လည် ဖြစ် နေ ဖိုု့ များ ပါ တယ်။
နှလုုံးသွေးကြော ပိတ် ခြင်း အပိုုင်း ၅ -----
မိတ်ဆွေ များ အား လုုံး ဗဟုုသုု အတွက် အောက်ပါ မေးခွန်း တစ်ခုု ကိုု တင် ပြ လိုုက် ပါ တယ်။
“ သွေးကြော ကျဉ်းနေမှုကို ဘယ်ဆေးရုံတွေမှာ၊ဘယ်လိုစစ်ရပါမလည်း၊
Inflammatory markers ကို ပြည်တွင်း Lab များမှာ စစ်ဆေးနိုင်ပါသလား၊ ခန့်မှန်းခြေ ဘယ်လောက်ကျပါသလည်း။ Thank you ”
ဒီ မေးခွန်းလေး ဟာ အင် မ တန် ကောင်း ပါ တယ်။
မေး သင့် မေး ထိုုက် တဲ့ မေးခွန်း လဲ ဖြစ် ပါ တယ်။
ပြန်ဖြေ ရ မယ် ဆိုု ရင် တော့ ---------
ခန္ဓာကိုုယ် ယောင်ကိုုင်း ခြင်း ( သွေးကြော များ အပါ အဝင် ) ဟာ နာ တာ ရှည် ရောဂါ မျိုးစုုံ ရဲ့ အဓိက အကြောင်း ဖြစ် ပါ တယ်။
နာ တာ ရှည် ရောဂါ ထဲ မှာ ကင်ဆာ ရောဂါ လည်း ပါ ဝင် ပါ တယ်။
သိုု့ ပါ သော် လည်း ဒီ အဓိက အချက် ကိုု ဆရာဝန် များ နဲ့၊ လူနာ များ သေသေချာချာ သိနားလည် ဖိုု့ ဘယ် သူ က မှ လိုုက် ပြီး ပြော ပြ မ နေ ပါ။
အဓိက အကြောင်း က တော့ ထိထိ ရောက် ရောက် ကြော်ငြာ ပေး နိုုင် ဖိုု့ ဆိုု တာ၊ ပိုုက်ဆံ အများကြီး လိုု ပါ တယ်။ ပိုုက် ဆံ အများ ကြီး အကုုန် အကျ ခံ နိုုင် တာ က လဲ ဆေးကုုမ္ဗဏီ ကြီး တွေ ဖြစ် ပါ တယ်။
သူ တိုု့ တွေ ဟာ လူ တွေ ကိုု cholesterol နဲ့ ဖြဲချောက် ပြီး cholesterol ချဆေး တွေ ကိုု အမျိုးမျိုး သော နည်း ဖြင့် promote လုုပ် ပြီး ရောင်း ကောင်း နေ ပါ တယ်။ ဝင် ငွေ အား ဖြင့် လည်း ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း များစွာ ရ နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဆရာဝန် အများစုု ဟာ လည်း စာဖတ် ချိန် သိပ် မပေး နိုုင် တာ ကြောင့် ဆေးကုုမ္ဗဏီ နဲ့ သူတိုု့ ကိုုယ်စားလှယ် တွေ ပြော သမျှ နဲ့ ပဲ ဆက် ကုု နေ ကြ တာ များ ပါ တယ်။
ဒါ တွေ ကြောင့် လဲ၊ လူနာ အများစုု ဟာ၊ ရောဂါ ဝဲ ထဲ မှာ ပဲ တ လယ် လယ် ဖြစ် နေ ကြ ပါ တယ်။
ကျွန် မ အရင် က ဟော ပြော ပွဲ တွေ မှာ ပြော ပြီးပြီ ဖြစ် သော် လည်း ထပ် ပြော ပြ ပါ မယ်။
ခန္ဓာကိုုယ် ယောင်ကိုုင်း ခြင်း သင်္ကေတ တွေ Inflammatory Markers တွေ က တော့ ----
( တစ် နည်း ပြော ရ ရင် သွေး ဖောက် စစ် သည့် အခါ မိမိ က နာ တာ ရှည် ရောဂါ ဖြစ် နိုုင် မှု အလားအလာ ရှိ သလား ဆိုု သည့် ခန့် မှန်း နိုုင် သော အချက် များ )
1. CRP ( C reactive proetein ) Healthy zone is less than 0.8 mg/L
2. Ferritin ( Iron ) women --- less than 80 microgram / L
Men ---- less than 90 microgram/ L
3. Fibrinogen ---- 180 – 350 mg/dl
4. Homocysteine ----less than 9micromol/L
5. Lp(a) ---------less than 30mg/dl
6. HDL cholesterol ------ women 40 -120md/dl
men 35 – 70 mg/dl
7. LDL cholesterol -----70 -130 mg/dl
8. Oxidized LDL ( VLDL )0–650 units
9. Triglycerides -----50 -180 mg/dl
10. Fasting blood sugar ---- less than 100mg/dl
11. Fasting Insulin ------less than 17microunits/L
12. Hb A1c -------less than 6% of total HGB
များသော အား ဖြင့်၊ ဆေးရုုံ နဲ့ ဆရာဝန် တွေ ဟာ၊ အချို့ သော test တွေ မှ အပ အခြား အရေးကြီး တာ တွေ လုုပ် လေ့ မရှိ တာ ကြောင့် ကိုုယ် က လုုပ် ပေး ဖိုု့ request လုုပ် မှ လုုပ် ပေး ပါ သည်။ ( နိုုင် ငံ ခြား မှာ )
မြန် မာ ပြည် မှာ အချို့ test တွေ ရ နိုုင် ပါ သည်။
ကိုုယ် က request လုုပ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
စျေး ဘယ် လောက် ရှိ တယ် ဆိုု တာ၊ ကျွန်မ မသိ ပါ။
သွေး ဖောက် လိုု့ ကိုုယ် က သွေးကြော ပိတ် နိုုင် တဲ့ အနေ အထား မှာ ရှိ တယ် ဆိုု ရင် -----
ဘေးတွက် ဆိုုး ကျိုး တွေ မရှိ တဲ့ test တွေ က နေ စ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
Electron beam CT to evaluate coronary calcifications ( calcium score )
ဒါ တွေ လုုပ် ပြီး တစ်ခုုခုု တွေ့ မယ် ဆိုု ရင် တော့
အသေချာဆုုံး က Coronary angiogram ဖြစ် ပါ တယ်။
သူ က တော့ invasive ဖြစ် ပါ တယ်။
ကျွန်မ ပြော ချင် တာ က အစား အသောက်၊ အနေ အထိုုင်၊ ကိုု ဂရုု စိုုက် မယ် ဆိုု ရင် ဒီ အခြေ အနေ အထိ ရောက် စရာ မလိုု ပါ ဖူး လိုု့ ထင် ပါ တယ်။
နှလုုံးသွေးကြောပိတ် ခြင်း ကျန်းမာရေးဗဟုုသုုတ အပိုုင်း၆ ------
နှလုုံးသွေးကြော ကျဉ်း နေ သူ များ၊
Stent ထည့် ထားသူ များ
Bypass လုုပ် ထား သူ များ
အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် ခွဲ လိုု့ မရ ဆိုု ပြီး အိမ် ပြန် လွှတ် ခံ ရ သူ များ
ခွဲ ဖိုု့ ငွေ အင်အား မရှိ သော ကြောင့် ၊ မခွဲ နိူင် သူ များ
နှလုုံးသွေးကြော လုုံးဝ ပိတ် သွား သော ကြောင့် အရင် က heart attack ရ သူ များ ----
ဆရာဝန် ပေး ထား တဲ့ ကိုုယ် သောက် နေ ကျ ဆေး တွေ လဲ သောက် ပေါ့။
ဥပါဒ် မရှိ ပဲ၊ နှလုုံး အင်အားရှိ လာ အောင် ရယ်၊ နှလုုံးခုုန် မှန် လာ အောင် ရယ် သဘာဝ supplements တွေ ထဲ က အ ကောင်း ဆုုံး တွေ က တော့ ---
၁. D Ribose Powder 10-15 gramsaday. အပူ၊အအေး၊ ကြိုက် တာ နဲ့ ဖျော် သောက် လိုု့ ရ ပါ တယ်။
၂. Magnesium Citrate or maleate 400- 600 mgaday in divided doses မနက် တစ် ခါ၊ ညအိပ် ရာဝင် ခါ နီး တစ် ခါ သောက် ပါ။
၃. CoQ10 200mg to 400mg daily သောက် ပါ။
အခုု Costco မှာ Members Mark Brand 200mg capsule ရောင်း နေ ပါ ပြီ။
၄. Acetyl L carnitine 1000 - 1500mg daily.
၅. CoQ10 ၏ အစွမ်း ပိုု ထက် စေချင် ရင် Vitamin E နဲ့ တွဲ ပြီး သောက် ပါ။
Unique E လိုု့ ခေါ် တဲ့ brand ဖြစ် ပါ တယ်။ ရိုုးရိုုး Vitamin E မဟုုတ် ပါ။ သူ က Vitamin E မျိုးစုုံ ရောစပ် ထား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ 400- 800 IU daily.
၆. Cod Liver oil သောက် ပါ။
ဘာ မှ အရှုံး မရှိ ပဲ၊ ရောဂါ သက် သာ လာ နိုုင် စရာ အကြောင်း အများကြီး ရှိ ပါ တယ်။
ကျွန် မ လူ အတော် များ များ မှာ စမ်းသပ် ကြည့် ပြီး ပါ ပြီ။ အံ့သြ ဖွယ် ကောင်း လောက် အောင် အောင် မြင် တာ ကိုု တွေ့ ရ ပါ တယ်။
အမျိုး သမီး တစ်ဦး ဘာမှ လုုပ် လိုု့ မရ တော့ ဖူး ဆိုု ပြီး ဆေးရုုံ က ပြန် လွှတ် လိုုက် ပါ တယ်။ မော လွန်း လိုု့ အိပ် ယာ က နေ အိမ်သာ တောင် ထ မသွား နိုုင် ပါ။ ဒီ ဆေး တွေ သောက် ပြီး ဘုုရားဖူး တောင် ထွက် နိုုင် ပါ တယ်။
ကျွန်မ အကြံ ပေး ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။
မိမိ ဘာ သာ ဆုုံး ဖြတ် နိုုင် ပါ တယ်။ အတင်း မတိုုက် တွန်း လိုု ပါ။
မိမိ သောက် နေ ကျ ဆေး တွေ ဖြတ် ပြီး ကျွန်မ ပြော တာ ကိုု သာ သောက် ရ မည် ဟုု လုုံးဝ မ ဆိုု လိုု ပါ။
ဗဟုုသုုတ ဝေငှ နေ ခြင်း သာ ဖြစ် ပါ တယ်။